အသံနည်းပညာ ADR | Popular
May 5, 2017 Popular
ရုပ်ရှင်တွင် ရုပ်/သံ အလွန် အရေးပါလာသည်။ အရည်အသွေး မြင့်တက်လာသည်။ တရုတ်ပြည် Beijing မြို့ကြီးတွင် 2016 Seminar for dubbing professionals from Asean Camtries သို့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ ဂီတမှူးကိုသက် (Oasis) အား တက်ရောက်ဆည်းပူးရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ကိုသက် (Oasis) သည် ရုပ်ရှင်တွင် အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာလုပ်ခဲ့သူဆရာဦးကျော်၏သားဖြစ်ပြီး နောက်ခံတေးဂီတတီးသူ၊ တေးရေးသူလည်းဖြစ်ပေသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် နောက်ခံတေးဂီတတွင် Film Scale ရေးသူသီးသန့်ရှိသည်။ Monitor system ဟုခေါ်သည်။ ထိုပညာရှင်က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ကားလုံးစာအတွက် music notes ကိုရေးရသည်။ ထို့နောက် instrument များ ခွဲပေးသည်။ တီးခတ်သူများသည် ၎င်းရေးပေးထားသည့်အတိုင်း မလွဲမသွေ တီးခတ် ကြရသည်။ ဤသည်ကို sound scale ဟုလည်းခေါ်သည်။
မြန်မာအခေါ်အဝေါ်တွင် ယနေ့တိုင်နောက်ခံတီးလုံး၊ Back Ground Music, Dubbing ဟု ခေါ်ကြသည်။ နိုင်ငံတကာအသုံးအနှုန်းတွင် Sound Scale သို့မဟုတ် Film Scale ဟု ခေါ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်သည် နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ကို မျက်ခြည်ပြတ်၍မရပေ။ Sound Post Production သည် တည်းဖြတ် Editter ထံမှ Project ကို OMF နဲ့ပေးရန် တောင်းဆိုသည်။ Open Media Frame Work ဟုဆိုသည်။ မူကကတည်းက ဖမ်းထားသော အသံလိုင်းအားလုံးကို ထည့်ပေးစေလိုသည်။ သို့မှသာ အသံများကို လိုအပ်သလို မွှေနှောက်အသုံးပြုနိုင်မည်။ သို့မဟုတ် အသံလိုင်းကိုအတောင့် လိုက်ပေးလိုက်ပါက မည်သို့မျှ ပြင်ဆင်မရဘဲ ဖြစ်နေတော့သည်။
Sound Post Production မှ ပညာရှင်များက 1. Lip synchron- ization 2. Editing Noise. 3. Level Balance. 4. Space. 5. Sound Design. 6. Sound Foley 7. Sound Final Mixing တို့ကို အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ရပါသည်။ Lip synchronization လုပ်ရာတွင် ADR ကိုအသုံးပြုသည်။ Automatic Dialogue Replacement ဟုဆိုသည်။ Protools ကို ချိတ်ဆက်ပြီး ပါးစပ်ပေါက်ကိုက်အောင် ထိပ်စအသံနှင့် အဆုံးကိုမှတ်ပြီး ADR Software ပေါ်တင်လိုက်ပါက Automatic အလိုအလျောက် ကိုက်သွားသည်။ နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားများ ပါးစပ်လွဲခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့စီမှာ တစ်လုံးချင်းလိုက်တိုက်နေရသည်။ အကယ်၍ ဆင်ဆာဖြတ်လို့ အသံလိုင်းများ ရွေ့လျားခြင်းအတွက် ပြန်တိုက်ရန် အချိန်မကုန်တော့ပါ။
Music Film Scale ကို track များခွဲ၍ပေးပို့ရန်၊ mixer ပညာရှင်က တောင်းဆိုသည်။ အကြောင်းမှာ Instrument များကို လိုသလို အတိုးအလျော့လုပ်ပြီး ၂.၁-၅.၁- ၇.၁ တို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ၂.၁မှာ Stereo ဖြစ်ပြီး ၅.၁၊ ၇.၁မှာ Surround လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ music မှအထူးပြုလုပ်လိုသော အသံကို Woofer သို့ ပို့ရသည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်သည် ယခုမှပင် အရုပ်အသံစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာကာစ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့တွင် ရုပ်ရှင် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဟူ၍မရှိပါ။ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် လေ့လာ ဆည်းပူးရယူကျက်မှတ်လုပ်ကိုင် နေရသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ရုပ်ရှင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရှိသည်။ ၄နှစ်အချိန်တက်ရောက်ရသည်။ ဘွဲ့ဒီဂရီယူခြင်း၊ ဒီပလိုမာယူခြင်း၊ ပညာရှင်များမွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ဘွဲ့လက်မှတ်ကိုင်၍ နိုင်ငံတကာတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
ယခုအခါ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်သို့ ယင်းဘွဲ့ရ ပညာရှင်များ ဝင်ရောက်လာနေပြီဖြစ်သည်။ သူတို့လုပ်အားခကို Dollar နှင့်ယူသည်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်အားခနှင့်ခုနှစ်ဆ တစ်ဆကွာသည်။ အထူးသဖြင့် မလေးနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပို၍နေရာယူ ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများကလည်း မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အဆင့် မြှင့်လိုခြင်း၊ ဈေးကွက်ချဲ့နိုင်ရန် နိုင်ငံခြားပညာရှင်များကို ခေါ်ယူ အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ပိုက်ထိုင်ကြည့်နေ ၍ မဖြစ်ပါ။ ရသမျှကို ခြစ်ကုတ်ရယူ၊ ပြင်းထန်စွာကြိုးစားရမည်။ ကျွန်တော် it ကမ္ဘာထဲ ဝင်မွှေမှ ရမည်ဖြစ်သည်။ ICT ကို ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ ထားရှိအသုံးပြုရမည်။
ယခုအခါ အာရှတွင် တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းရုပ်ရှင်သည် လွန်စွာမှ တိုးတက်လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာကို ရင်ပေါင်တန်းနေကြပြီဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံများတွင် online service အလွန်အားကောင်းပြီးနေရာတိုင်းတွင် Wifi free ပေးထားသည်။ နည်းပညာကို လွယ်ကူစွာရှာဖွေ နိုင်ကြသည်။ နည်းပညာများသည် Up to Date အဖြစ် မြန်လွန်း၍ ကျွန်တော်တို့ လိုက်မီဖို့မလွယ်ကူလှပေ။ အသံနှင့်ပတ်သက်၍ Studio ကြီးငယ်လတ်များစွာ ရှိနေခြင်း၊ meni recording များစွာ ရှိနေခြင်း ကလည်း လူငယ်များအတွက် လေ့ကျင့်သင်ယူစရာ၊ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိနေသည်။ ထိုနေရာများတွင် magic software ကို သုံးကြသည်။ Bollywood နာမည်ကြီး အဆိုတော် Somu Nagamasa (ဆိုနူးနဂန်)၏သားသည် အသက်၁ဝနှစ် ဝန်းကျင်မျှသာရှိသေးသည်။ ယင်းကလေးမှာ music program ကို computer တွင် ရေးသားနိုင်ပြီး software များကို အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် လူငယ်များသိသည်ထက်ပို၍ သိအောင်၊ တတ်အောင် ICT ကို လက်ကိုင်ထား၍ software များကို အလွန်ရင်းနှီးခွင့်ရရန် လိုနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လှေကား တစ်ထစ်ကျော်တက်လာပါပြီ။ နောက်ထပ်နှစ်ထစ်တက်ရန် ကြိုးစား ရပါဦးမည်။